Ankadifotsy : Nahazo Poste de Police – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2013 → novembre → 22 → Ankadifotsy : Nahazo Poste de Police
Ankadifotsy : Nahazo Poste de Police
Redaction Midi Madagasikara 22 novembre 2013 Ankadifotsy, Poste de Police
Omaly maraina no notokanana ny « Poste de Police de Proximité » eny amin’ny fokontany Ankadifotsy-Antanifotsy, ao anatin’ny Boriborintany fahatelo eto Antananarivo Renivohitra, izay eo ambany fiahian’ny « Commissariat de Police » ao Antaninandro. Tonga nitokana izany tamin’ny fomba ofisialy ny minisitry ny Filaminana Anatiny, ny Contrôleur Général de Police Rakotondrazaka Arsène, notronin’ireo mpiara-miasa aminy akaiky.
Vonona ny polisim-pirenena, hoy ny minisitra, hanamafy ny fiaraha-miasa amin’ny tompon’andraikitry ny fokontany amin’ny alalalan’ireo andrimasom-pokonolona. Nambarany fa tonga dia am-perinasa ity Poste de Police ity ka nanafatrafatra ireo polisy hiasa ao izy mba ho mendrika eo am-panatanterahana ny asa.
Taorian’ity fitokanana ity dia nijery akaiky ny Poste de Police de Proximité eny Manjakaray, izay eo ambany fiahian’ny “Commissariat de police” Analamahitsy ny minisitra. Nitafa fohy tamin’ireo mpitondra ao amin’ny fokontany sy ny solontenam-pokonolona amin’ny endriky ny fiaraha-miasa tsara hapetraka eo amin’ny polisim-pirenena sy ny fokontany. Noderainy manokana ny olon-tsotra manam-piniavana nanangana ireto fotodrafitrasa roa ireto.